Virtual Earth wuxuu cusbooneysiiyaa 21 TB sawirro ah - Geofumadas
Virtual Earth wuxuu cusbooneysiiyaa 21 TB oo sawirro ah
Maarso, 2009 dalwaddii Earth
Taasi waa inta ay le'eg tahay xaddiga xogta ee Virtual Earth ay soo dirtay maalmahan Maarso, iyo waddamada deegaanka Isbaanishka aan looga tagin; Mexico iyo Brazil ayaa ahaa ka faa'iideystayaasha ugu badan. Magacyadu waxay ku qoran yihiin Ingiriis, sida loogu dhawaaqay Virtual Earth.
Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika Caribbean / Waqooyiga Ameerika Galbeedka Yurub
Calaamadee dalkaaga, sababtoo ah cusbooneysiintu waxay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu weyn sannadihii la soo dhaafay.
Post Previous" Hore Ku beddel shp si kml ... iyo sigaar cabbid oo dhan
Post Next Maanta 8: 30 PMNext »